Ọnwụ Ọrịa Na-emetụta Tattoos: Ihe oyiyi ndị a gosipụtara ya | Igbu egbugbu
Nnukwu Mfu Na-emetụta Tattoos: Ihe osise ndị a na-ekpughe
Ọnwụ dị arọ na -emetụta egbugbu n'ahụhụ? Gịnị ma ọ bụrụ na anyị enweta ahụ ike, ma ọ bụ mee agadi, ma ọ bụ tụrụ ime? Enwere ike imebi ma ọ bụ gbanwee nha ha? Enwere egbugbu na -adịkarị mfe karịa nke ndị ọzọ? Ndị a bụ ụfọdụ ajụjụ ọtụtụ mmadụ na -ajụ maka ihe dị iche iche.
Ọ ga -ekwe omume na ị ga -abanye mgbatị ahụ wee nweta nnukwu ahụ ike ma ọ bụ, na ntụle, ịchọrọ ịlafu kilo ole na ole. Ga -ahụ nke gị egbugbu? Ọ ka mma ichere ruo mgbe ị ga -ebu ibu nke ịchọrọ igbu egbugbu? Eziokwu bụ na e nwere ntakịrị akụkọ obodo gbasara ya. N'okpuru, anyị ga -anwa inyere gị aka site na ịza ajụjụ ndị a na -ajụkarị.
1 Kedu ihe na -eme ahụ m mgbe m gburu egbugbu?
2 Gịnị ma ọ bụrụ na m egbugbu ma ahụ ahụ etolite?
3 Enwere m ike ịga n'ihu na -azụ ọzụzụ ma ọ bụrụ na egbugbu m?
4 Kedu ihe na -eme egbugbu m ma ọ bụrụ na m felata?
5 Ebee ka egbugbu na -adịchaghị mma?
6 Enwere egbugbu na -adịkarị mfe nkwarụ karịa ndị ọzọ?
7 Foto nke Tattoos mgbe arọ dara
Kedu ihe na -eme ahụ m mgbe m gburu egbugbu?
Ka anyị cheta ntakịrị ihe na -eme ahụ anyị mgbe anyị na -egbu egbugbu tupu anyị ahụ ihe na -eme mgbe anyị nwere mgbanwe, dị ka a ga -asị na anyị felata ma maa abụba.
N'ụzọ bụ isi, Ogbugbu gụnyere itinye ink n'okpuru epidermis, ya bụ, na akpụkpọ anụ. Ọ bụrụ na nke a abụghị ya, egbugbu ahụ nọrọ n'elu akwa akpụkpọ ahụ, ọ ga -ewe naanị izu ole na ole, ebe mkpụrụ ndụ dị na mpụga na -agbanwe mgbe niile. Ọ bụ ya mere onye na -ese egbugbu ga -eji gbadaa ntakịrị.
Ebe ọ bụ na igbu egbugbu ka bụ ọnya (nke ọma, ọtụtụ narị ọnya microscopic) a na -arụ ọrụ sistemụ ahụ iji luso iyi egwu ahụ ma ziga ebe ahụ. fibroblasts, ụdị sel nke ga -eloda ụfọdụ ink n'ime mwepụ iji wepu ya. Site n'inwe ọrụ a, anyị nwere ike ịtụle na fibroblasts bụ "ndị mere mperi" nke egbugbu ahụ na -efufu ntakịrị ka ọ na -agwọ.
Gịnị ma ọ bụrụ na m egbugbu ma ahụ ahụ etolite?
Ugbu a anyị ekwuola gbasara ihe na -eme ahụ anyị mgbe anyị na -egbu egbugbu, oge eruola ikwu maka ya kedu oke ibu (ma ọ bụ uru, dị ka ọ dị na nke a) pụtara maka egbugbu. Yabụ, mmụba nke akwara na -emetụta ọdịdị nke egbugbu?
Azịza ya bụ na Ee e.
Azịza dị ogologo karịa na -ekwu na a na -akwado akpụkpọ ahụ ka ọ were mgbanwe dị arọ n'ụzọ ziri ezi, nakwa na o yighị ka ị ga -ahụ mgbanwe ọ bụla na egbugbu gị ma ọ bụrụ na ị nweta ahụ ike (ya bụ nwayọ). Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị nwere egbugbu ebe enwere ike ịgbatị akara (nke anyị ga -ekwu maka ya n'okpuru) ọ nwere ike gbanwee ụfọdụ.
Enwere m ike ịga n'ihu na -azụ ọzụzụ ma ọ bụrụ na egbugbu m?
Ajụjụ ọzọ a na -ajụkarị gbasara isiokwu a bụ ma anyị nwere ike ịga n'ihu na -akụzi mgbatị ahụ ka anyị gbuchara egbugbu, n'izu ole ọ ga -ewe iji gwọọ. Azịza ya bụ ee, mana n'ebughị ụzọ gafere: ụbọchị mbụ ọ ka mma izu ike iji mee ka ahụ ruo gị ala wee gbakeee, na mgbakwunye, ọ bụrụ na ọnya ahụ dị ọfụma na ọsụsọ gị, ọ ga -ekwe omume na ọ nwere ike bute ya. Agbanyeghị, mgbe ọnya mechiri ma ọ bụ na -emechi (nke dabere na nke ọ bụla) ị ga -enwe ike zụọ nwayọ na -atụghị egwu na igbu egbugbu gị ga -emebi.
Kedu ihe na -eme egbugbu m ma ọ bụrụ na m felata?
Ọ bụrụ na anyị egbuo egbue ma tufuo kilogram ole na ole, ọ nweghị mmetụta a na -ahụ anya na egbugbu ahụ. Ọ gaghị emetụta ya ma ọlị. Ugbu a, ọ bụrụ na anyị na -ekwu maka oke ibu dị oke ibu, dịka ọmụmaatụ, kilogram 20, ọnọdụ ga -agbanwe. Tinyere akụkọ a, anyị na -egosi gị mkpokọta foto na -egosi anyị tupu na mgbe ndị felatala na etu egbugbu ha si dị ugbu a.
Na -etinye nlebara anya pụrụ iche na onyonyo, anyị na -aghọta nke ahụ ọtụtụ egbugbu ndị buru ibu nke ukwuu ma bụrụ ndị a na -ahụ anya 'agbachapụla'. N'ọnọdụ ndị dị oke egwu nke mgbanwe dị arọ, ma n'otu akụkụ ma n'akụkụ nke ọzọ, enwere ike imebi egbugbu ahụ, na -eme ka ọ dị mkpa ịga ụlọ ihe nkiri iji mezie "mmebi", n'agbanyeghị na ọ bụ ihe na -eme. na mpaghara ebe akara agbatị na -apụtakarị.
N'aka nke ọzọ, Ọ dị mkpa iburu n'uche na, dịka enwere ike ịhụ na onyonyo a, n'ọtụtụ oge, oke ibu na -emetụta egbugbu, mana anaghị emebi ya.. Ọ bụ ezie na nha ha dịgasị iche iche, ha ka bụ otu. Na na ahụmịhe nke m, enwere m ike ịsị na nke a bụ ikpe, a na-emetụta egbugbu dị ka mgbanwe ahụ na-eme.
Ebee ka egbugbu na -adịchaghị mma?
N'etiti ebe kacha mma igbu egbugbu n'atụghị ụjọ nrụrụ, anyị ga -achọ ebe ndị ahụ akara agbatị adịghị apụta na ndị na -ewe ogologo oge iji gosi mmụba ma ọ bụ ibelata ibu, dịka ọmụmaatụ, nkwonkwo ụkwụ, ụkwụ, ogwe aka, ubu ... .
Kama nke ahụ, enwere ọtụtụ ebe ndị ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkwa na ha ga -ebu ibu ma ọ bụ pere mpe ka oge na -aga, dịka ọmụmaatụ, eriri afọ ma ọ bụ hips. Nke a dị oke mkpa maka ndị chọrọ ịmụ ụmụ: ọ ka mma ibu ụzọ buru ụzọ karịa igbu egbugbu na mpaghara ahụ!
Na mgbakwunye na oke ibu, enwere nnukwu ihe ọzọ nwere ike ikpebi ma igbu egbugbu ga -emebi oge: afọ. A) Ee, ma ọ bụrụ na ịchọghị ka egbugbu gị yie ogologo ka ị na -etolite, zere ebe akpụkpọ anụ na -amị amị na akpa, dị ka olu.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya izere ebe enwere nkwonkwo, dị ka nkwojiaka, ebe ọ bụ na ka oge na -aga, akpụkpọ ahụ na -enye onwe ya, ọ nwere ike imetụta ihe ịchọ mma nke egbugbu ahụ n'ụzọ na -adịghị mma.
Enwere egbugbu na -adịkarị mfe nkwarụ karịa ndị ọzọ?
Anyị na -ejedebe ịza ajụjụ ọzọ gbasara ịbelata oke na egbugbu, ma ọ bụrụ na enwere atụmatụ nwere ike imebi na mgbanwe ahụ anyị na -enweta karịa ndị ọzọ. N'ezie, Obere egbugbu nwere ike yie ihe na -adịghị mma mgbe oke ma ọ bụ oke ibu dị, ebe ndị kacha ibu na -egosi ọdịiche.
N'aka nke ọzọ, na n'ụzọ ezi uche dị na ya, atụmatụ symmetrical nwekwara ike igosi mgbanwe mgbe mgbanwe dị arọ. N'ihi ụdị iberibe ha, enwere ike ịhụ mgbanwe ọ bụla, ebe ọ bụ na amara mejupụtara kpọmkwem na jiometrị hypnotic ahụ dị jụụ. Dịka ọmụmaatụ, na egbugbu ndị a, anyị nwere ike ịgụnye mandalas, geometric ma ọ bụ ebo.
Ibelata ibu na egbugbu na -emetụta atụmatụ dị obere karịa ka a tụrụ anya yaỌ dabara, n'agbanyeghị na ịmara ọnọdụ ahụ nke ọma tupu egbugbu enyere gị aka ịme mkpebi kacha mma, ọ dị mma? Gwa anyị, ị felatala ma ọ bụ nwee oke ibu ma egbugbu gị? Kedu ihe mere egbugbu gị, ka ihe anyị kwuru ugbu a emezuola ma ọ bụ, n'ụzọ megidere, ọ dị iche kpamkpam?
Foto nke Tattoos mgbe arọ dara
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ogbugbu » Nnukwu Mfu Na-emetụta Tattoos: Ihe osise ndị a na-ekpughe
chris n'anya dijo
Enwetara m egbu egbu na obi m ma eziokwu ahụ bụ, ọ na-egbu mgbu nke ukwuu, enwere akara 2, ụfọdụ akwụkwọ ozi n'akụkụ aka ekpe na n'akụkụ aka nri a harlequin, nke mbụ ọ bụ harlequin ahụ, m weere akụkụ nke obi na akwara na akụkụ ahụ kachasị nwee mwute, ana m akwado ka ha mee ya ebe ọzọ n'ihi na karịa ihe ọ bụla na-egbu mgbu ekele
Zaghachi chris n'anya
Sda egbugbu: nchịkọta nke atụmatụ na ihe ọ pụtara
Kedu ụkpụrụ ịdị ọcha na ịdị ọcha ka ụlọ ihe nkiri egbugbu ga-eso?